Male – Page3– Healthy Life Journal
သုက်ပိုးများစေနည်း (Sperm count)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မေး။ ။ ဆရာရှင့် အမျိုးသားရဲ့ သုက်သွေး ဓာတ်ခွဲအဖြေ ကို ပို့ပါတယ်။ ကလေးရဖို့ အားနည်းတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ ဘယ်လိုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမလဲ လမ်းညွှန်ပေးပါ။ ဖြေ။ ။ ကလေးရဖို့ဆိုရင် သုက်ပိုးတွေရဲ့ ရှင်သန်နိုင်စွမ်း ဟာ...
Testosterone (တက်စတိုစတီရုန်း) ကျား-ဟော်မုန်း
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မေး(၁). မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့်။ သမီးက Pharmacist တစ်ယောက်ပါရှင့်။ တချို့ယောကျာ်းလျာတွေက Online Shopping ပုံစံနဲ့ တက်စတိုစတီရုန်းထိုးဆေးတွေ၊ စားဆေးတွေကို ရောင်းပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိကြောင်းပြောကြ၊ ရေးကြပါတယ်။ တချို့ယောကျာ်းလျာလေးတွေဆိုတာလည်း အသက်၂၀ပင် မပြည့်သော်ငြား ရဲတင်းကြပါတယ်ရှင့်။ ယောကျာ်းဆန်ချင်လွန်းတာကြောင့်...
ဆီးကျိတ်ကြီးသူအတွက် အစားအစာ. . .
ဆီးကျိတ်ကြီးတဲ့အခါ ဘယ်လို အသီးအနှံ၊ အရွက်တွေကိုစား ပေးရင်ပျောက်စေသလဲ၊ ဆီးကျိတ်ကြီးတာကိုပျောက်စေဖို့အတွက် ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ။ Ei Myat Mon (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ဆီးကျိတ်ကြီးတဲ့ အခြေအနေကို အသက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အစားအ သောက်နဲ့...
သုက်ရည်ထဲမှာ သုက်ပိုးမရှိရင် . . .
မေး။ ။ ဆရာ . . အမျိုးသားသုက်ရည်ထဲမှာ သုက်ပိုးမရှိလို့ သားသမီးမရတာကို ဘယ်လို့ကုလို့ရပါသလဲ။ လှလှမြတ်(FB)။ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ သုက်ပိုးမရှိရတဲ့အကြောင်းကို စစ်ဆေးပါ။ ဥပမာ သုက်ပို့ပြွန်ပိတ်နေတာလား၊ သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှု နည်းနေတာလား စစ်ဆေးပါ။ ပူလွန်းတဲ့...
ပန်းသေပန်းညှိုးဆိုတာ . . .
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ မေး ။ ။ အမျိုးသားတွေမှာဖြစ်တဲ့ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဆိုတာ ဘာကိုခေါ်ပါသလဲ။ ကိုကျော် (FB) ဖြေ ။ ။ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဆိုတာ ဆေးပညာအရ Erectile Dysfunction ကို ဆိုလိုပါတယ်။ အဲဒါကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်...
ဆီးသွားရင် သွေးပါပြီး အောင့်နေတယ် . .
မေး. ဆရာ. . အမျိုးသားက ဆီးသွားရင် သွေးပါလို့ပါ။ အခုသူပြနေတဲ့ အထွေထွေဆရာဝန်က ဆေးထိုးပေးတယ်၊ သောက်ဆေးကို ၁၅ရက်စာပေးတယ်။ သူ့ကိုသုက်ရည်ခမ်းလို့ ပင်ပန်းလို့ဖြစ်တာလို့ပြောပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။ သုက်ရည်ခမ်းတယ်ဆိုတာ မကြားဖူးလို့ပါ။ ကန်တော့ပါဆရာ။ လိင်ဆက်ဆံပြီး သူဆီးသွားတော့ သွေးတွေတအားထွက်တာပဲ။ သူကအောင့်တယ်လို့ လည်းပြောတယ်။...
အမျိုးသားတွေ ကာမအားတိုးဆေး ငါးလုံးလောက်သောက်ရင်ဘာဖြစ်တတ်သလဲ . . .
မေး ။ ။ မေးစရာလေးရှိလို့ပါ။ အမျိုးသားတွေသောက်တဲ့ ကာမအားတိုးဆေး အင်္ဂလိပ်ဆေး အနီရောင်ဆေးလေးတွေကို တစ်ခါတည်းငါးလုံးလောက်သောက်ရင် ဘာဖြစ်တတ်လဲသိချင်လို့ပါ။ ကိုလတ် (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ ။ အမျိုးသားတွေပန်းသေပန်းညှိုးတဲ့အခါ သောက်ရတဲ့ဆေးကို ဆိုလိုတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေဟာ ကာမအားတိုးဆေးမဟုတ်သလို...
ဝှေးစေ့အောင့်ခြင်း . . .
မေး။ ။ ကျွန်မ အမျိုးသားဝှေးစေ့အောင့်အောင့်နေတာကြာပြီ။ အခုဆိုဆီးသွားရင် သွေးပါတာ ဘာကြောင့် လဲ၊ ဘာရောဂါလဲ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဆရာဝန် ပြသင့်တယ်၊ လမ်းညွှန်ပေးပါရှင်။ သနပ်ခါးလေး (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ဝှေးစေ့အောင့်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပြီး ကူးစက်ရောဂါတွေ၊...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ အရင်ဆုံးဆီးကျိတ်ရဲ့တည်နေရာနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ ။ ဆီးကျိတ်ဟာ အမျိုးသားမျိုးပွားအင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားက သစ်ကြားသီးအရွယ် အချင်း ၃စင်တီမီတာမျှရှည်လျားပြီး ၂၀ ဂရမ်မျှလေးပါတယ်။ ဆီးအိမ်အဝမှာရှိပြီး ကျင်ချောင်း (Urethra)...